ဒီရောက်ပြီး စကားလုံး အသစ်ဆန်းတွေ ကြားမိမှတ်မိတယ်။ အရင်တုန်းက သင်တန်းမှာမကြားဘူးတဲ့ ဂျပန်စကားလုံးတချို့ပါ။ TV ကြည့်ရင်း ခဏခဏကြားလို့ မှတ်မိနေတာ။
ပုံမှန်စာလုံးက Umai ပါ။ "အူမအိ" အရသာရှိတယ်ပေါ့။ "အိုအိရှိအိ"နဲ့ အတူတူပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အသက်ကြီးပိုင်းတွေက "အိုအိရှိအိ"လို့ သုံးကြတာများပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက "အူမအိ"ကို ပိုသုံးကြတယ်။ တချို့က အရမ်းအရသာရှိတယ်ဆိုပြီး အမူအယာနဲ့လုပ်ပြီးပြောရင်း "အူမအိ"ကနေ "အူမဲအိ"ဖြစ်သွားရော။ "မဲ"ကို အသံရှည်နဲ့ ဆွဲပြောရင်း "အိ"အသံပျောက်သွားတယ်။ うまい(အူမအိ) うめい(အူမဲအိ) うめ-----(အူမဲ-----)
မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းအစီအစဉ်မှာ ကြားမိတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မျက်နှာ "မျက်နှာပြောင်"ပေါ့။ ဂျပန်မလေးတွေ လူရှေ့သူရှေ့ အထူးသဖြင့် TVအစီအစဉ်ထဲမှာ "ဆူပင်း" ဖြစ်ရမှာ အတော်ကြောက်ကြပါတယ်။ အိမ်ကလိမ်းလာတဲ့ မိတ်ကပ်တွေက မျက်နှာသစ်လိုက်တော့ အားလုံးပြောင်သွားပြီး နဂိုမျက်နှာပေါ်လာရော။ တချို့က သိပ်မပြောင်းသွားပေမယ့် တချို့က မျက်ခုံးမွှေးငုတ်စိနဲ့ ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာ ဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အလှပြင်ကဏ္ဍတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ သူလိုကိုယ်လိုမျက်နှာကနေ အရမ်းပြောင်းသွားကြတာလည်း ရှိတာကိုး။ ကျွန်မတော့ ဘွဲ့ယူတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ကပ်တစ်ပိဿာနဲ့ "ငါ့သူမသိ-သူ့ငါမသိ" ဖြစ်ခဲ့ကြတာ အမှတ်ရသေးတယ်။ すぴん(ဆူပင်း)နဲ့ မြင်နေကြဆိုတော့ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်လိုက်တော့ မမှတ်မိကြတာလေ။
ကြော်ငြာ၂ခုမှာ ကြားမိတဲ့ စကားလုံးပါ။ မိန်းကလေးဘဲပြောတာ တွေ့ဘူးတယ်။ ဟာသတခုခုမပြောခင် ကြိုပြောတဲ့ စကားလုံးပါ။ ဘာလို့လဲတော့မသိပါဘူး နှာသံနဲ့ "なんちゃって! なんちゃって!" "နန်းချတ်တဲ့!! နန်းချတ်တဲ့!!" လို့ ပြောကြတယ်။ Japanese English Dictionary မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှာကြည့်တော့ just kidding! လို့တွေ့ပါတယ်။ "နောက်တာနော်!" "ပေါက်ကရနော်!" ဆိုတဲ့သဘောထင်ပါရဲ့။
ဂျပန်ယောက်ျားလေးတွေပြောကြတဲ့ စကားလုံးပါ။ ကိုယ်ထင်တာထက် တဖက်သား(သို့) တဖက်ကိစ္စကသာနေရင် သုံးကြပါတယ်။ "やばい--やばい" "ရာဘအိ--ရာဘအိ" "မလွယ်ဘူး--မလွယ်ဘူး"။ ပုံမှန်စကားလုံးက Sugoi すごい (ဆူဂေါ့အိ) "အံ့သြစရာဘဲ အံ့သြလောက်အောင်ဘဲ" လို့ သုံးတာပါ။ ဘန်းစကားလိုမျိုး ပြောကြတယ်။ မိန်းကလေးတွေပြောတာတော့ မကြားဖူးသလောက်ဘဲ။ မိန်းကလေးတွေက ပုံမှန်စာလုံးတွေဘဲသုံးတာ များပါတယ်။
ဒီစကားလုံးက အခုတလော အရမ်းကို ခေတ်စားနေပါတယ်။ McDonald's ရဲ့ ကြော်ငြာမှာတောင် သုံးလိုက်သေးတယ်။ ဒီစာလုံးကို စထွင်ပြီးပြောတဲ့သူက IKKO ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်အလှဖန်တီးရှင်ပါ။ သူပုံကိုပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့ဆန့် လက်ညိုးလေးတစ်ချောင်းထောင်ပြီး လက်ကိုခါခါ-ခါခါနဲ့ "どんだけ!" "ဒွန်းဒကဲ!" လို့ပြောတဲ့စတိုင်ကနေ အရမ်းခေတ်စားသွားတာပါ။ "ရာဘအိ" "ဆူဂေါ့အိ" လိုမျိုးပါဘဲ။ ဒီစကားလုံးကနဲနဲ ဟာသဖက် ရောက်ပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင် "ဟယ်--တကယ်!" "အံ့သြပ!!" "ဟယ်--လူဆိုး--ဇွတ်!!" ပေါ့။
Posted by မြရွက်ဝေ at 8:19 AM
Chit Oo "Mstudio" Photographer said...
September 7, 2007 at 2:53 AM
မမြရွက်ဝေက ဂျပန်မှာပဲနေတာဆိုတော့ တိုကျိုမှာလားဟင်။ လာလည်ပြီး comment ပေးထားတာ ကျေးဇူးပါ။
မမြရွက်ဝေကမှ ဂျပန်စာ တော်တော် နားလည်သေးတယ်.. ကျမဆို တောင်တစ်လုံး မြောက်တစ်လုံးနဲ့ ရီရတယ်.. နောက်မှ ထပ်လာလည်အုံးမယ်နော်.. အဖော်ရပြီ။
thanks u for sharing, i don't know the last one.
i live in Kyoto.where do u live?
September 7, 2007 at 4:27 PM
အမှတ်တရ အိမ်ရှင်မ (၃)
အမှတ်တရ အိမ်ရှင်မ (၂)
တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) အားကစားပြိုင်ပွဲ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ ဝူရှူးနှင့် ဂျူဒိုပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲများ ပြုလုပ်